थ्री डन गरेर मोडल बनेकी करुणा – Puleso
By:puleso Published Date: आइतवार, बैशाख ९, २०७५
– १७ वर्ष ।
– तपाई त करातेको खेलाडि हो क्यारे नी ?
– हो, मैले सात वर्षदेखि कराते खेल्न थालेको थिए ।
– ए ! ब्ल्याक बेल्ट गरिसक्नुभयो होला हई ?
– ब्ल्याक बेल्ट त १३ वर्षकै उमेरमा गरेको । अहिले थ्री डन खेल्दै छु ।
– थ्री डन ! यत्ति सानै उमेरमा ।
म चकित परे । करुणा श्रेष्ठसँग मेरो भेट्ने वित्तिकै भएको कुराकानी थियो यो । काली–काली हिस्सी परेकी करुणासँग मेरो पहिलो भेट थियो । यस्तो लागिरहेको थियो कि उनी मेरी बाल्यकालदेखि कै साथी हुन् । सारै मिल्ने साथी । घमण्ड कतै छैन । सारै फ्रेन्ड्ली । दुःखको कुरा गर्दा पनि शान्त । सुखको कुुरा गर्दा पनि शान्त । शान्तिको भावबाट अविचलित । विजयमा नमात्तिने र पराजयमा नआत्तिने करुणाको स्वाभाव साँच्चै नै लोभलाग्दो थियो ।
खेलाडिहरु घमण्डी हुन्छन् भन्ने मेरो सोच नै बदलियो थ्री डन खेल्दै गरेकि करुणासँगको भेटले । कुराकानी लामै भयो उनीसँग । एकैछिनमा तीन घण्टा बितेछ ।
कुराकानी कै सन्दर्भमा उनले भनिन्, “सायद अब कराते खेल्न छोड्छु होला । मैले करातेका लागि जीवनको दश बर्ष दिएँ । कारातेले मलाई बेच्न नमिल्ने, खान र लाउन पनि नमिल्ने ट्रफि मात्र दियो । अलि–अलि चर्चा दियो । आत्मबल दियो तर जीवन त त्यतिले कहाँ चल्दो रैछ र !”
करुणाको लागि आजसम्म सबै कुरा उनकी आमा हुन् । आज उनलाई यो अवस्थामा पर्याउन उनकी आमाले धेरै दुःख काटेकी छिन् । यो मानवता मर्दै गएको शहरमा । नाफाखोरको बस्तीमा । “आमाले हामीलाई कसरी हुर्काउनुभयो होला ? म शब्दमा व्यक्त गर्न सक्दिन । आमाले गर्नुभएको दुःख र धैर्यताको अगाडि मलाई सबैकुरा थोरै लाग्छ । मेरी कमला दिदी हुनुहुन्छ । भारतोलनमा उहाँले नयाँ रेकर्ड नै बनाउनु भएको छ । मलाई यो ठाउँमा पुर्याउन उहाँले आमापछिको भूमिका निर्वाह गर्नुभयो । म उहाँहरुको रिनी भएको छु ।” निकै भावुक हुँदै करुणाले आमा र दिदीलाई यसरी सम्झिइन ।
सितोरियो कराते खेलेर थुप्रैपटक राष्ट्रिय खेलमा गोल्ड मेडल जितेकी करुणाको २०७४, कात्तिकमा चितवनमा भएको खेलले धेरै नै तित्त दुखेको छ । “त्यो गेममा रेफ्रीले यति झेली गर्यो कि मेरो गुरुले मलाई खेल भैरहेकै बेलामा बाहिर निकाल्नु भयो । जीवन मै यस्तो भएको थिएन । सारै नरमाइलो लाग्यो । त्यो दिनबाट गेम खेल्न मन लाग्न छाड्यो ।” करुणाले आफुलाई सम्हालदै भनिन् ।
खेलाडिलाई राज्यको कुनै सहयोग छैन । विदेशमा गेम खेल्न जानुपर्यो भने क्षमता भएपनि छनौट हुन पावर कि आफ्नो मान्छे चाहिन्छ । छनौटमा परिहाले पनि आफैले खर्च व्यहोरेर जानुपर्छ । ज्यान बाजी राखेर राष्ट्रका लागि मेडल जितेर ल्याइयो भने सम्मान गरेजस्तो गर्छन । करुणाले दुखेसो पोखिन । करुणा अहिले आदर्श आजाद उ.मा.वि. मा १२ कक्षामा अध्ययन गर्दैछिन् । करातेमा आफ्नो करिअर नदेखें पछि उनी अहिले मोडलिङ र गायन क्षेत्रमा लागेकि छिन् । करुणाले रेकर्ड गराएको गीत हो– प्रयास । यो गीत गाएसँगै उनलाई अहिले थुप्रै गीत गाउने अफर पनि आएको छ । उनले फेसन सो मा पनि भाग लिन भ्याएकी छिन् । करुणालाई फिल्म खेल्ने अफर पनि नआएको होइन तर चित्तबुझ्दो भूमिका नभएकाले उनले खेलिनन् । उनलाई याक्सनको भूमिकामा फिल्म खेल्न सारै रहर छ । त्यस्तो अफर आयो भने नगुमाउने उनले बताइन ।